BIM - Peeji nke 2 - Geofumadas
Chris Andrews dere ederede bara uru na oge mkparịta ụka na-atọ ụtọ, mgbe ESRI na AutoDesk na-achọ ụzọ isi weta ịdị mfe nke GIS na akwa nke imewe na-agba mbọ ịghọta BIM dị ka ọkọlọtọ na injinia, ụkpụrụ ụlọ na usoro ihe owuwu. Ọ bụ ezie na isiokwu ahụ na-ewere ọnọdụ nke ndị a ...
Bentley Systems na-agbasawanye atụmatụ na akwụkwọ na-enyefe na ụlọ ndị ọzọ site na inweta S-Cube Futuretech
Ike ohuru ohuru maka nyocha ihe omumu, imewe na akwukwo ihe omuma Bentley Systems, tinyekoro ta taa kwuputara nnweta ihe eji eme ulo na Mumbai site na S-Cube Futuretech Pvt. Ltd. Ihe mgbakwunye nke Ngwa S-Cube Futuretech na-agbasawanye onyinye Bentley Na-adaba adaba na…
Ihe onyinye "Oscar of Infrastructure" ga-abụ na Singapore
Bentley Systems ekwuputala oku maka ntinye ntinye oru maka 2017 Be Inspired Awards maka BIM Ọganihu na Akụrụngwa. Na-elekwasị anya na ọganihu na BIM ọkọlọtọ, Bentley Systems na-ezube idobe oku ya maka afọ ndị na-abịanụ na Far East; kpomkwem afọ a na otu nke obodo onye ịme ngosi uwe ...
Allplan: 4 2017 ekwe nkwa ọhụrụ mmalite
Allplan na-enye BIM ngwọta Allplan 2017-1: Oge ka ukwuu maka ihe dị mkpa - Ọtụtụ mmụba maka oke ịdị mfe nke njikwa ọrụ na ịme ngosi 3D. - Kachasị data mgbanwe site IFC4. - Nnukwu nhọrọ nke sistemụ njikọ sistemụ Allplan na - eweta ndozi ọhụụ yana ọganiihu ya na BIM ngwọta Allplan 2017 maka ndị na-atụpụta ụlọ na